Hurumende Yoronga Kupa Mapazi Ayo Mari Shoma Pane Yavari Kuda muBhajeti
Paramende nemusi weMuvhuro yatanga kunzwa kubva kumapazi ehurumende pamusoro pebhajeti ra2019 uye zvabuda pachena kuti mapazi akawanda akanzi nebazi remari aunze mabhajeti ari pasi pasi pemari yavanoda kushandisa izvo zvichakanganisa mashandiro awo gore rinouuya.
Vachitaura pamusoro pebhajeti rebazi ravo regore rinouuya, munyori mubazi rezvevashandi, Doctor Judith Kateera, vazivisa komiti yeparamende inoona nezvevashandi kuti bazi rakaziviswa kuti bhajeti rebazi ravo harifaniri kudarika mamiriyoni makumi masere nematatu.
Dr Kateera vanoti bazi ravo rinokwanisa kuita zvirongwa zvaro nemazvo kana rikawana mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu.
Vatiwo kunze kwekupihwa mari isingavakwanire, bazi rine zvikwereti zvinodarika zana remamiriyoni makumi masere uye rave kutarisa nzira dzakasiyana siyana dzekutsvaga mari kwete kungomirira hurumende chete.
Vatiwo vanovimba kuti nhaurirano dziri kuitwa nehurumende nedzimwe nyika dzichabudirira kuti bazi ravo rikwanise kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemAsangano akasiyana siyana.
Chikwereti chikuru chebazi iri ndecheBasic Education Assistance Module (BEAM) icho chisati chabhadharwa nebazi iri kuzvikoro kubva muna 2015 kusvika pari zvino. Chikwereti ichi chave pamadhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu.
Komisheni inoona nezvevashandi vehurumende, yazivisawo kuti inoda bhajeti remari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemaviri. Asi yakatoudzwa kuti bhajeti rayo haifanira kudarika zana remamiriyoni nemakumi mapfumbamwe nerimwe.
Pavabvunzwa kuti sei pasina chinoratidza kuti mari yekubhadhara kana kuti huwandu hwevashandi vehurumende hurikudzikira, munyori mukuru mukomisheni iyi, VaJonathan Wutawunashe, vati vari kuedza napose pavanogona kuderedza huwandu hwevashandi vehurumende.
Vati vashandi vehurumende vakawandira kubazi rezvehurumende nehutano uye vari kuongorora mapazi ehurumende kuona kuti vangagadzirisa nyaya iyi sei.
Vatiwo nyaya yevashandi vehurumende vanonzi vanongobhadharwa vasina zvavari kuita iri kugadziriswawo.
Vanoongorora nyaya dzezvehupfumi VaMasimba Manyanya vati zvinosuwisa kuti mapazi ehurumende achapihwa mari shoma vachiti izvi zvichakanganisa mashandire emapazi aya.
Vati hurumende ine mari yakawanda chose iyo inoshandiswa zvinhu zvisina maturo. Paramende ichatura zvese zvairi kuudzwa kubazi rezvemari. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vanotarisirwa kutura bhajeti ravo rekutanga mwedzi unouya.